TRUESTORY: April 2013
တပည့်တော် နဲနဲ ထပ်ဆွေးနွေး ချင်သေး တယ်။
မေးခွန်း နံပါတ် (၂)ကို တချို့ ကိုမေးကြည့်တော့ သူတို့ က အစီးခံ ရတဲ့သူက ဘ၀င် စိတ်ကျ သွား တယ် လို့ပြော တယ်။ နောက် အိပ်ငွေ့ ချခံရ တဲ့သူ နှင့် လည်း တူတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါ ဘုန်းဘုန်း ဖြေပေး ထားတဲ့ အဖြေ နှင့် သဘော တရားချင်း တူတယ် လို့ ပြော လို့ရ လားဘုရား။
မြေဇင်းနည်းနှင့်တရားအားထုတ်တဲ့ကိစ္စ ခေါင်း ထဲဝင်လာ တယ်။ သူတို့နည်း မှာ ယောဂီတွေကို နတ်ပြည်၊ ငရဲပြည် သွားကြည့် ခိုင်းတယ် ဆိုတာ မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးအဲဒီယောဂီကသွားတာလဲဆိုတာ နောက်မှတပည့်တော်ကို စာပေနှင့် ကိုက်ပြပေး
Posted by Gentle Men at 11:14 AM No comments:
Legal Aid Projectဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအသက်(၁၈)နှစ်အောက်ရှိပြစ်မူကျူး လွန် စော် ကား ခံရသော ကလေး သူငယ်များ ၊ လူငယ် များနှင့် သက်သေများ ၊ ပြစ်မူ ကျူးလွန် သည် ဟု စွပ်စွဲ ခံရသော ကလေး သူ ငယ်များ နှင့် လူငယ်များ၊ အသက်(၁၈)နှစ် ကျော်သော်လည်း အမျိုး သမီးဖြစ် သည့်အတွက် ပြစ်မူ ကျူး လွန်စော် ကား ခံရသော(female survivos of gender based violence) အမျိုး သမီးများ အတွက် အမူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခ (ရှေ့နေခ) တစ်စုံတစ်ရာမယူဘဲ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ ကူညီပေး သည့် စီမံ ချက်ဖြစ် ပါ သည်
-မသိနားမလည်၍ သော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံး စရိတ် မတတ်နိုင်၍ သော် လည်းကောင်း၊ ရှေ့နေ ငှားရမ်းခ မတတ်နိုင် ၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိနစ်နာသောအမူ ကိုတိုင်တန်း ရန် (သို့) စွပ်စွဲ ခံ ရသော အမူကို ရင် ဆိုင်ဖြေရှင်း ရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ လိုက်
Posted by Gentle Men at 10:03 AM No comments:
ဆေး ခွေ နဲ့၊ ခြေဆေး ရည်ဘူး အနံ့ များနဲ့ ခြင် ကို နှိမ်နှင်းတာ ထက်စာရင် အများကြီး အကျိုးရှိ တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလည်းမကုန်၊ ကျန်းမာ ရေးလည်းညီညွတ်စေ ပါတယ်။ ကွန်ပျူ တာနဲ့Soundboxရှိရင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်း ဖြစ်
တွေကနေ နှင်ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ပုဇင်းရင်ကွဲ တစ်ကောင်ရဲ့ အသံ တုန်ခါမှု ပမာဏ ရှိတဲ့ Audio file ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ခြင် များသူ့အလိုအလျောက်ထွက်ပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အခန်းတစ်ခန်းလုံးကြားရလောက်အောင် မြည်မယ့် စပီကာတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ နည်း စနစ်ကျကျဆိုရင် အခန်း ရဲ့ လေး ဘက်လေးတန်မှာ
Posted by Gentle Men at 9:28 AM No comments:
ဘုန်းဘုန်းတခါကသိုက်အကြောင်းတွေ ရေးဖူးလို့ တပည့်တော် သရဲဝင် ပူးတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးချင် ပါတယ်။ ဘာသာရေး အထောက် အ ထားတွေ အရ (သို့) တခြား ခိုင်လုံတဲ့ အထောက် အထားတွေ အရ (သို့) ဘုန်းဘုန်းကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။တပည့်
တော်သရဲစီးတာနှင့် ပတ် သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အတွေ့ အကြုံ ပို့စ်တစ် ပုဒ်ရေးချင်လို့ပါဘုရား။အဲဒါမရေးခင်ဘုန်းဘုန်းဆီကသဘောထား အမြင်လေး မေးကြည့် တဲ့သဘောပါ ဘုရား။ ကိုယ်ကြုံ တွေ့ခဲ့ရတာ ကယ် ဖြစ်နိုင် ၏၊ မဖြစ်နိုင် ၏ ချိန်ညှိကြည့်ချင် လို့ပါ ဘုရား။ ဘုန်းဘုန်း အားရင် ပြန်ဖြေပေး
အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်သော စစ်သားများအတွက် ထူးခြားသည့် အရေးယူမှုများ
အပျိုမိန်းကလေး တစ်ယောက်၊ စစ်သားဘေး က ဖြတ်လျှောက်လျှင် မကြောက်ပါနဲ့။ မလန့် ပါနဲ့။ ကိုယ်ဟန် ပျက်ေ လာက်အောင် ကိုယ်နှုတ် အမူအယာလုပ်သည်နှင့်ပြစ်မှုပုဒ်မ(၅၀၉)အရ
ထောင် ဒဏ် (၁)နှစ် အပြစ် ပေး ခံရဖို့ ဥပဒေ ကပြဌန်းထားပါတယ်။သားပြောမယားပြော
ပြောတာ၊ အိမ်မှာနေတုန်း လာေ ချာင်း တာ တို့ ဆိုလျှင်တော့အဆစ်တွဲစစ်ဘက်ဥပဒေ လေး
တွေ ပါ ထည့်ပေါင်းပြီး ထောင် ၅ နှစ် အထက် ကျေ စလောက် သည့် ဥပဒေ ရှိပါတယ်။
ဒါကဥပမာတစ်ခုပါ။စစ်သားတစ်ယောက်အမှုဖြစ်သည့် အခါတွင် စစ်ဘက်ဥပဒေကော၊ အရပ်ဘက် ဥ ပဒေ ပါ (၂)မျိုးလုံးနှင့် အရေး ယူ ခံရသည်ဟူသော စကားကို စစ်သားများထံမှ အကြိမ်ကြိမ် ကြားဖူး ကြ မည်။ သို့သော် စစ်သားနှင့် ဆိုင် သော အမှုကို တပ်တွင်းမှာပင် စစ်ဆေး သဖြင့် ပြည် သူများအနေဖြင့်သက်သာအောင်လုပ်လိမ့်မယ်၊အပြစ်လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုသည့် အမြင်များ ဖြစ်ကြ သည်။အမှန်တွင်တော့စစ်သားများဆိုသည်မှာစစ်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ဆင်လိုက်သည်နှင့် စောင့်ထိန်းရ မည့် စည်း ကမ်းတွေ က စဉ်းစား လိုက်ရင်တောင် အိပ်မပျော်နိုင်လောက်အောင် ရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ဆက်တိုက် အသုံးပြုနေသူများ မျက်စိကို ဘယ်လို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းမလဲ
ကွန်ပျူတာကိုတစ်နေကုန် ကြည့်တဲ့သူတွေ မျက် စိ အတွက် ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေ ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်၊ မောက်စ်တို့ ကို နေ ရာမှန် ထားတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ Screen ဟာ သင့်မျက်လုံးကနေ သင့်ရဲ့ လက်တစ် လှမ်းစာ အကွာနဲ့ မျက်လုံးရဲ့ (၂၀) ဒီဂရီအောက် နိမ့်နေရ ပါမယ်။
သင့်အခန်းတွင်းအလင်းရောင်ပျံ့နှံ့ပါစေ။ဒါမှကွန်ပျူတာScreenမှလာသောReflection တွေကို လျော့
Posted by Gentle Men at 8:40 AM No comments:
ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ၁၆ ဦး မင်္ဂလာဒုံတွင် ဖမ်းမိ၊ နှစ်ဦး လွတ်မြောက်
တပ်မတော် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ အခြေစိုက်စခန်း များ တည်ရှိရာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် သစ်ဆိမ့်ကုန်း ရပ်ကွက် မလိ ခ လမ်း၌ ဧပြီလ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်၃နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်က ဆူပါ ကာစတန် ၈ဈ / ၈၁၆၃ မော်တော်ယာဉ် ပေါ်၌ ရခိုင်ပြည် နယ်ဘက်မှ ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသား ၁၆ ဦးကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင် ခဲ့သော် လည်း ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး လွတ်မြောက်ေ နကြောင်းမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှူးရုံး၏တာဝန်ကျရဲအ ရာရှိက The Voice သို့ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လွတ်မြောက်သွားသော ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ စုံစမ်း ရှာဖွေနေပြီး ဖမ်း မိ ထားသည့် ဘင်္ဂါလီအမျိုးသား ၁၆ဦးကို လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေး (လ.ဝ.က)
SSA (ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့မှ သီပေါမြို့နယ်တွင် ရွာသားများအား ဖမ်းဆီး
ဟိုင်း) အဖွဲ့မှ အင်အား(၁၀) ဦးခန့်သည် လက် နက်ငယ် ကိုယ် စီဖြင့် သီပေါမြို့နယ် မိုင်းလင်းကျေးရွာနှင့် ခုတ်နမ့် ကျေးရွာရှိ ရွာသား (၁၂) ဦးအား ထော် လာ ဂျီ ၁ စီးဖြင့် ခိုနဖားကျေး၇ွာသို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ (၁၂) ဦးမှာ-
(၁) မောင်အောင်ခန့် (၂၅)နှစ်၊ (ဘ)ဦးပန်၊ ခုတ်နမ့် ကျေးရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်။
(၂) ဦးအောင်သိန်း (၅၆)နှစ်၊ (ဘ) ကျယ်လှ၊ ခုတ်နမ့်ကျေးရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်။
Posted by Gentle Men at 8:32 AM No comments:
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံပြည်သူ ရာနဲ့ချီထွက်ပြေး
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူမြို့ပေါ်မှာ မနေ့ညက တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသား တပ် မတော် (DKBA)တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ BGF ကရင် နယ်ြ ခားစောင့်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွား တာကြောင့် ဒေသခံ ၄၀၀ လောက်ဟာ အိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာပြီးတိုက်ပွဲလွတ်ရာကို ပြောင်း
ရွှေ့ နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မနေ့ည၁၁နာရီကျော်ကနေ မနက် ၂ နာရီကျော် ထိ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့BGFကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကမြို့ေ ပ်ါမှာ
ရခိုင်ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ အစိုးရဆီ တင်ပြခဲ့ တဲ့အစီရင်ခံစာပါအကြံပြုချက်တွေကို ကော်မ
ရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်၊ ဦးကျော်ရင်လှိုင်၊ဦးကိုကိုကြီး၊ဦးသူရ ခေါ်
ကိုဇာဂနာနဲ့ ဦးအောင်နိုင်ဦး တို့က ရန်ကုန်မြို့ ကငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာသတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲလုပ်ပြီး ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြ တာ ပါ။
ဘေးဒုက္ခသင့်သူတွေအရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊လူမှုအ၀န်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုသဟဇာတဖြစ်ရေးစသည်အားဖြင့်ကဏ္ဍ၁၂ခုအတွက်အကြံပြုချက် အသီးသီးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီတင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာထည့် သွင်း တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ လူမှုအ၀န်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပုံမှန် အခြေအနေ ပြန်ရောက်ဖို့ အချိန်ယူရလိမ့်မယ် လို့ ကော်မ ရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေက ပြောကြသလို၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စကို တိုင်းပြည်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥ ပဒေတွေ အတိုင်း ကျင့်သုံး လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦး က ပြောပါ တယ်။
အကြံပြုချက်တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကလို ပါလာတဲ့ကိစ္စကတော့ လုံခြုံရေးကိစ္စပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်ကို ရုပ်သိမ်းတာ ဒါမှမဟုတ် သိသာတဲ့ အရေအတွက် နဲ့ လျှော့ ချ တာမျိုးကို မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကော်မရှင်က အကြုံပြုထားပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက် လို့ ပြောဆိုကြတာတွေ အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ အိုးအိမ်ပစ် ထွက်ပြေးသူတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာမှာ သိခဲ့ရတာကတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆက်ရှိစေချင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ နောက် ကော် မ ရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ရင်လှိုင် က ပြောပါတယ်။
“လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း စစ်တပ်ကို ဖယ်ရှားသွားစေချင်သလား၊ ရှိစေချင်သလား ဆိုတဲ့
Posted by Gentle Men at 8:09 AM No comments:
"ဥာဏ်ကြီးရှင် ကျော်မင်းဆွေ ရေ ခင်ဗျားရဲ့ ဦးနှေက် နဲ့ စဉ်းစား ဥာဏ်ကိုတော့ ပြတိုက့်ပို့ပြီး မှတ်တမ်းတင်ရမလားတောင် မသိတော့ပါဘူးဗျာ" (ဆရာဝန်တစ်ဦး)
သောက်တစ်လွဲ လုပ်ရပ်များ ဂျာနယ်တွေမှာလုပ်ရတာနဲ့ငါဟာကမ္ဘာမှာအတော်ဆုံးအတတ်ဆုံထင်နေတဲ့အရူးက ပညာတတ်..အတတ်ပညာရှင်တွေကိုစော်ကားတာ..အံ့သြမဆုံးဘူး..
ဥာဏ်ကြီးရှင် The Voice Weekly က Editor ကြီး (ကျော်မင်းဆွေ) ရေ...
ကျွန်တော်တို့ လူနာအားကိုးရတဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲဆို့တာ ဖြုတ်ဦးနှောက် ပဲ ရှိပြီး ဖွဘို့လောက်သိတဲ့ ခင်ဗျားတို့ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၆ နှစ်လုံးလုံးကိုယ့်မိဘအထောက်အပံ့ရယ် တစ် ဖက် က ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးရလာတဲ့ ငွေကိုအသုံးချပြီးကျောင်းပြီးအောင်တက်ခဲ့ရတာပါ ခင်ဗျားတို့ ဆီ က ဘာအကူအညီများရခဲ့လို့လဲ? ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်သင်ဆရာဝန်ဘဝရောက်တော့လဲ ချီးမြှင့်လစာ တစ် လ မြန်မာငွေ ၁၁၅၀ နဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဆေးရုံမှာ နေ့ရောညပါ တိုင်းပြည်တာဝန် ပြည်သူ့အကျိုးကို ထမ်ေ ဆာင် ခဲ့တာပါ။
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ၁၅၀၀၀ မပြည့်တဲ့လစာနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို တတ်နိုင်သလောက် စောင့်ရှောက့် ခဲ့ တာပါ။ ဆင်ရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူနာတွေဆို မရှိမယ့်ရှိမယ့် ကိုယ်အိတ်ကပ်ထဲ ကပိုက်ဆံကိုသုံးပြီး လူနာ အတွက်
Posted by Gentle Men at 4:53 PM No comments:
၀တပ်ဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့် KIA တပ်ဖွဲ့အတွင်းသေနတ်များကိုပြင်ဆင်
KIA တပ်ဖွဲ့ မှ တိုက်ပွဲအတွင်းပျက်စီးသွားသော လက်နက်များကို ပြန်လည်ပြန်ဆင်ရန်အတွက် “၀”တပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ကျွမ်းကျင်သူ များနှင့် ပြင် ဆင်နေကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။ “ ၀ ” တပ်ဖွဲ့မှ လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူ၂ဦးသည်လိုင်ဇာသို့ ဧပြီ လ ၂၆ရက်နေ့ က ရောက်ရှိလာပြီး KIA တပ် ဖွဲ့များဖြင့်စခန်းတွေမှာပျက်စီးနေသောလက် နက်များကိုလိုက်လံ ပြင်ဆင်နေကြောင်း၊ စခန်းတွေမှာ ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း လက်နက် ခဲယမ်း များကိုဖြည့်တင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦး ၏ပြောပြ ချက်
Posted by Gentle Men at 4:25 PM No comments:
အမှုဖွင့်ထားသူတွေ ကြည့် လိုက်တော့ ရန်ကုန်မှာ ၈၈ တွေ ပတ်ပြီးလုပ်စားနေလို့ လုပ်စားစရာခွက်ပျောက် နေ
တဲ့ အထောက်အပံ့တွေယူပြီး ဆူပူနေတဲ့ကွန်ယက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ ကကောင်တွေပါတယ်။
နေတဲ့ ကျောင်း သား သမဂ္ဂ ဆို တာ ပါတယ်။
အဲဒီသူတွေအတွက် နေ့စဉ် ၁၀ အိမ်က အလှည့်ကျ ထမင်းချိုင့် ပို့ပေးရတယ်။ ဆီအပြည့် ဆိုင် ကယ် ၆ စီး စီ စဉ် ပေးရတယ်။ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးရတယ်။ ခရီး စ ရိတ်၊ အရက်ဘီယာလေးတွေပါ ဆက်သ ရတယ်။
ထောက်ပံ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ က ငွေရတယ်။ ဒေသခံတွေဆီ က စရိတ်ရတယ်။ဟန်ဝင်း
အောင်တို့ လက် ပံတောင်းက မခွာချင်တာအဆန်းမဟုတ် သ လိုဒီလောက်တောင် အာ ဏာ ပိုင် မှတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မကလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း လာရင်တောင် လမ်းလျှောက်ခိုင်းအုံးမှာပဲ။
Posted by Gentle Men at 2:41 PM No comments:
The Voice Weekly ဂျာနယ်၏ Facebook Page အား မြန်မာဆရာဝန် နှင့် ဆေးကျောင်းသားများ စုပေါင်းကာ Report လုပ်လျှက်ရှိ
Nyi Nyi Win Din : The Voice Weekly journal page ကို ဆရာဝန် ဆေးကျောင်း သားများ အားလုံး report လုပ်ပေးကြရအောင်ပါ။ စိုင်း အိုက် သီဟ ရဲ့ အကြံပေးချက်ပါ။
Nyi Nyi Win Din : Continue Reporting The Voice Weekly. Show the unity of medical society. — with Hnin Wut Yee Win and 99 others.
The Voice ဂျာနယ်သည် တစ်လ တစ်သိန်း ခွဲကျော်ကျော်သာလစာ ရရှိသော ဆရာဝန် များအား တစ်လလျင်အခွန်ငွေတစ်သိန်းဆောင်သင့်သည်ဟုဝါဒများတင်သောကြာင့်ဆရာဝန်များနှင့်ဆေးကျောင်း သား အားလုံး The Voice Facebook Page အားReport တင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Posted by Gentle Men at 2:21 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ်မှာ ဆရာဝန် နဲ့ စစ်သားမရှိပဲ လျောက်လှမ်းနိုင်ပြီလား..
ဖွဘုတ်ကြီးပေါ်မှာ ပြည်သူ တွေအထင်လွဲခံရဆုံးကတော့စစ်သားနဲ့ဆရာဝန် ထင်မယ် ဆရာဝန်တွေ က ပြည်သူတွေကိုကြင်ကြင်နာနာ ဆေးကုပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်သောဆရာဝန် မကောင်း မှု့ကြောင့် ဂျာနယ်တွေက အစဆရာဝန်တွေက ဘယ်လို ဘယ်လိုဆိုပြီး ဝေဖန်ကြ တယ် လေ ကန်ကြတယ်ပေါ့....ဒါပေမဲ့ အဖြစ်က (တစ်ယောက်သော ဆရာဝန် ကြောင့်ပါ)
ကဲ စစ်သားတွေကို ကြည့်ရအောင် သူတို့လည်း အတူတူပဲခုကြည့် ဘယ်နေရာမှာ ပြည်သူတွေ
Posted by Gentle Men at 2:18 PM No comments:
“အခွင့်ထူးခံလူတန်းစား” တဲ့လား (The Vioce မှ ဆရာ ၀န် များအားပုတ်ခတ်ထားသောကြောင့် ပြန် လည်ဖြေ ရှင်းထား ချင်းဖြစ်ပါသည်)ဟောသည်ကကျွန်တော့်မော်တော် ဆိုင် ကယ် အဟောင်းလေး ရဲ့ နဖူးစီးမှာ ကပ်ထားတဲ့ တိပ်အ စိမ်းကြားတြိဂံ ပုံလေးက “သည်လအတွက် ဆိုင်ကယ် အပ် ခ ပေးပြီး” လို့ အမှတ်အ သားလုပ် ထားတာပါ။ ကျွန်တော် တာဝန်ကျနေတဲ့ မန္တလေးဆေးရုံကြီး၊ ဖျားနာကုသဆောင် (၁)ထိပ်က ဆိုင်ကယ် အပ်ရာနေရာမှာ ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ် အပ်ခလပေးနဲ့ ပေးရပါတယ်။ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဌာန၊
နေရာကိုအလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ဆိုင်ကယ်အပ် ခ ပေး ပြီးမှလာရတဲ့“အရာရှိ” ဆိုတာ မြန်မာပြည် မှာ ဆရာဝန်တွေ အပြင် သိပ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။
ဒီဆေးရုံကြီးထဲမှာပဲ ဖျားနာဆောင် (၃) ကို သွားရမယ့် ကိစ္စရှိလို့ အဲဒီရှေ့က ဆိုင်ကယ်စတန်းမှာ သွားရပ်လိုက်ရင် တစ်ခါအပ် (၂ဝဝ) ပေးရပါတယ်။ ကုတင် ၃ဝဝ ဆေးရုံကြီး က ဆေးကျောင်း သားတွေကို စာသွားသင်ပေးရတဲ့နေ့ဆို အဲဒီဆေးရုံမှာ
Posted by Gentle Men at 2:10 PM No comments:
လက်ပံတောင်း ဒေသတွင် ရွာသူရွာသားများ အကြား သွေး ထိုးမြှောက် ပင့်ကာ ဆူပူမှုများ ဖြစ်စေသည့် ဟန် ၀င်းအောင်နှင့် အဖွဲ့အား အလိုရှိသည် ကြော်ငြာများ နေရာ အနှံ့ကပ် ၍ ဖမ်းဆီးမှု စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစောပိုင်း ဝေငှခဲ့သည့်စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကြေညာချက်၌ အမှုဖွင့်ခံရသူများကို သတင်းပေးတိုင်ကြားရန်ပျက်ကွက်သူများအား ထောင်ဒဏ်၆လအထိချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း၊ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇၆ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း၊ သေဒဏ်ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူကို လက်ခံထား
Posted by Gentle Men at 2:01 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ရန် အစီအစဉ်နှင့်ပါတ်သက်လို့သူ့စိုးရိမ်မှု့
တိုင်ပြည် ရဲ့ အနာဂါတ် မှာ ဗလီဆောက်၍ ဘုံကျောင်းတည် ကုန်ရောင်းဝယ် ကပြားတွေ သမ္မတဖြစ် ဖို့ အခွင့်အ ရေး ရသွားနိူင်သော ဥပဒေမဖြစ်ဖို့တော့ နိူင် ငံသားတို့သတိရှိရှိ ဆောင် ရွက်ပါ မှ နောင် အတွက် မြန်မာပြည်ဟာ။သာယာမှုနဲ့ သာသနာပြုနိူင်သော နိူင် ငံ အဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိနေ မှာပါ။
အမျိုးက ကပြား | သွေးရောထား။
တို့မြန်မာများ | ရှောင် ရန်ကွယ်။
နှောင် အခါ ဝယ် | တိုင်းပြည် အ ရေးမို့ ။
သတိရှိကြဘို့ | မှာချင် တယ်။
တစ်ခါပြင် မယ် | ဥပဒေ ကြောင့်။
ပေါက်ဖေါ် ကလားတို့ | ပျော် ကြမယ်။
အ ပေါ်က အရှင် | လူမျိုး ခြားမို့ ။
ကိုရွှေ မြန်မာများ | ကျွန် ဖြစ် မယ် ။
နှောင် တစ်ခေတ်မယ် | သာ သ နာ ပျောက်လို့ ။
ဘာ သာ ခြားတို့ | ရန် မူ မယ် ။
အမျိုးသား ရေးကို | ရှေ့တန်း တင် လို့ ။
ဒို့ ပြည် ကြီး ကို | ကာ ကွယ် ကွယ် ။
မှာ ချင် တယ် | နိူင် ငံ ရေး သ မား တို့ ။
သတိ ရှိရှိ ဆောင် ရွက် ကွယ် ။
အဲ့ ဒါ မှ *** ဗိုလ် ချုပ် မှာ တဲ့ | လွတ် လပ် နိူင် မှာ လေ******
ပြည် ချစ် သား | မ ဟော် သ ဓါ
Posted by Gentle Men at 10:45 AM No comments:
ဒီလိုလူတွေရှိနေသမျတော့..ပေးကားပေး၏မရဘဲ..တိုင်ပြည်ဒုက္ခရောက်အောင်..တကယ်လိုအပ်တဲ့ လူတွေ တွက်ခက်ခဲအောင်လုပ်နေတာ..လူထု ထဲကလူတွေပါဘဲ..အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါ..ကိုယ်တိုင်လဲအဲဒီထဲမပါအောင်ကြိုးစားစမ်းပါ... ရှက်တတ်စမ်းပါ
မဲပေါက်သူ တချို့ ထံမှ လာသည်ဟု ယူဆရ သည့် ကတ်တချို့က ဖုန်း အရောင်း ဆိုင်တွင် တကတ် ကျပ်၇၀,၀၀၀အထိ ပေါက်ဈေး ဖြစ်နေ သည်။
ရောင်းပေးတယ်…သူတို့ခေါ်ဈေးက ကျပ် ၈၀,၀၀၀ အထိရှိတယ်…၊ ကျွန်မတို့ လည်း ဆိုင်မှာပြန်ရောင်း ရအောင်လို့ကျပ်၆၅,၀၀၀ နှင့်ကောက်လိုက်တယ်၊
ပြီးတော့ဆိုင်မှာ ကျပ် ၇၀,၀၀၀ နှင့်ပြန် လည်ရောင်း
Posted by Gentle Men at 10:25 AM No comments:
သောက်သုံးရေရှားပါးသည့် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊ သီလ ရှင် ကျောင်းများနှင့် ကျေးရွာ
ဒေသများသို့နယ်မြေခံ တပ်မတော် သားများက တပ်ပိုင်ရေ သယ်ယာဉ် များဖြင့် သောက်သုံးရေ
လျက်ရှိရာ ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ရမည်း သင်း မြို့နယ်ရှိ ရွှေမြင်တင်တောင် ဘုရားတွင် ရေကန် ဆယ်တင်ခြင်း အား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ညောင်ပင်အိုင်ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စု၅၂ဝစုအ တွက် သောက်
Posted by Gentle Men at 10:14 AM No comments:
ယခုကဲ့သို့ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ရခြင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ စိတ်ဝင် စား
Posted by Gentle Men at 10:09 AM No comments:
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်း အနားကိုဧပြီ၃ဝရက်ညနေ၅နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ
မြန်မာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟို ဌာန (MICC)၌ကျင်းပမည် ဖြစ်ရာအဆိုပါအခမ်းအနား ကျင်းပ ပုံ များကို MWD Channel နှင့် MWD Variety Channel တို့မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ပြသ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ သည်။From...မြ၀တီ
Posted by Gentle Men at 10:04 AM No comments:
ပေးဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ကောင်းမွန်ရေးအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီ အစဉ် (United Nations Development Programme) မှကန်ဒေါ်လာသန်း၁၅၀ ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ သမဂ္ဂနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏၂၀၁၃၂ဝ၁၅ခုနှစ်
Posted by Gentle Men at 10:02 AM No comments:
ယနေ့ မွန်းလွဲ၃း၀၀ နာရီခန့်က MITTသီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမှထွက်ခွါလာသောကားတင်သင်္ဘောနှင့် မြန်မာ့ရေနံ ဓါတုဗေဒလုပ်ငန်းပိုင်ဆီတင်သင်္ဘောဖြင့်တိုက်မိပြီး ဆီတင်သင်္ဘောနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
ကားတင်သင်္ဘော M.V MELACCA HIGHWAY
M.VMelacca Highway ကားတင်သင်္ဘောမှာ သီလ၀ါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွါလာချိန်တွင် ရန်ကုန်မြစ်ဝမှ ၀င်လာသော မြန်မာ့ရေနံဓါတုဗေဒလုပ်ငန်းပိုင်မြန်အောင် လောင်စာဆီတင်သင်္ဘောနှင့် တိုက်မိပြီး ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းတောင်ဘက်တွင်မြန်အောင်သင်္ဘောနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
မြန်အောင်သင်္ဘောပေါ်တွင်ပါရှိသူများကိုမြန်မာ့ရေတပ်မတော်မှ ကယ်တင်ထားခဲ့ပြီး ကားတင်သင်္ဘောမှာ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း ကျောက်ချရပ်နားခဲ့ရသည်ဟုဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ ရေလမ်းကြောင်းစီစဉ်သူတစ်ဦး ကပြောသည်။
သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှု စတင်နေ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်
စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းဆည်းထားသော လယ် ယာမြေများအတွက်လျော်ကြေးဖြေရှင်း မှု မရှိသေးသော်လည်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်မှု (EIA) ကို မတ်လ ၂၉ ရက်မှ စတင်ကောက်ယူနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသည့် Resource and Environment Myanmar ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း က ပြောသည်။
ဇီဝ မျိုးစုံမျိုးကွဲ၊ အပင်မျိုးစိတ်များ ၊ စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လေ အရည်အသွေး၊ ရေ အရည်အသွေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ အသံ
ဆိုင်ကယ်ဖယ်ခိုင်းသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲကို လူနှစ်ဦးရိုက်နှက်
ဒေါပုံမြို့နယ် သင်္ဘောကျင်းမီးပွိုင့် အနီး ဆိုင်ကယ်မှောက်၍ လမ်းပိတ်နေသည်ကို လမ်း ဘေးသို့ ဖယ်ရှားခိုင်းသည့် ရဲအရာရှိအား ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်က ဆိုင်ကယ်မောင်းသူနှစ်ဦး က သံတုတ်ဖြင့် ဝိုင်းရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိ ရ သည်။
အရက်သောက်ထားပြီး လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို စီးနင်းလာသူနှစ်ဦး အရှိန် မထိန်းနိုင်ဘဲ လဲကျခဲ့ကာ လမ်းပိတ်နေ၍ တာဝန်ကျယာဉ်ထိန်းရဲ အရာရှိက လမ်းဘေးသို့ ရွှေ့ပေးရန် ပြောဆိုခြင်းကို ၄င်းတို့ နှစ်ဦးကဆဲဆို၍ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ၄င်းလူနှစ်ဦးက
ချင်းပြည်နယ်သို့ ယခုနှစ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၀င်ရောက်မှုနှုန်းမှာ ယခင်နှစ်များက ထက် မြင့် တက် လာပြီး အများစုမှာ သုတေသန ပညာရှင်များဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့နယ်မှ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများက ပြောကြသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း မင်းတပ်နှင့် ကန်ပက်လက် မြို့နယ်များ သို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် လာရောက်မှုနှုန်းမှာ ပျမ်းမျှ ၇၀၀ မှ ၈၀၀ အကြားတွင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဒီနှစ် ခရီးသွားတွေ များလာတယ်။ ဥရောပ နိုင်ငံသားတွေ များတယ်။ အရင်နှစ်တွေကထက် ထက်ဝက် ကျော်ကျော် ပိုများလာတယ်” ဟု နတ်မတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ် စတင်တည်ထောင် သူ ဦးရှိန်းဂေငိုင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ် အတွင်းသို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ
Posted by Gentle Men at 6:34 PM No comments:
ဂျက်စတင်ဘီဘာ ရဲ့ ကားပေါ်မှာ ဆေးဝါးများနှင့် Stun gun တွေ့ရှိ
ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က ၁၉ နှစ်အရွယ်၊ ကနေဒါ ကမ္ဘာေ ကျာ် ပေါ့စတား ဂျက်စတင်ဘီဘာရဲ့ ခရီးသွား ကားပေါ်မှာ ဆေးဝါးများနှင့် StunGunတစ်လက်တွေ့ ရှိထားကြောင်း ဆွီဒင်ရဲအရာရှိက ပြောကြား ပါ တယ်။သူ့ကားဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်း မြို့တော်မှာ ဂီတဖျော်ဖြေရေးမလုပ်ခင် ဘီဘာနေထိုင်တဲ့ Stockholm ဟိုတယ်အပြင်မှာ ရပ်ထားတာဖြစ်ပါ တယ်။ဘီဘာအပါအ၀င် ခရီးသည် ၁၀ လောက် ကားပေါ်မတက်ခင်မှာ မူးယစ်ရဲအရာရှိများ နိုးနိုး ကြားကြားနဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တာလို့ Mr Jyllander ကပြော ပါတယ်။ ဆေးဝါး အနည်း ငယ်နှင့် Stun Gun တစ်လက် တွေ့ခဲ့တယ်လို့ သူကဆက်လက်ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ်။
ခုတော့ ဆေးဝါးတွေကို မှု့ခင်းဆေးဝါးစစ်ဆေးရေး ဌာနသို့ပို့ထားပြီး တိကျတဲ့အဖြေရဖို့ စစ်ဆေးနေ ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Stun Gun ကတော့ သေးငယ်ပဲဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ ကိုင်ဆောင်ဖို့အတွက် ပါမစ်တော့ လိုအပ်
Posted by Gentle Men at 6:28 PM No comments:
ပြည်ပရောက် မြန်မာအချင်းချင်း ယုတ်မာကာ မုဒိန်းကျင့်ရန်ကြိုးစားပြီး လူသတ်ခဲ့
ဟိုတလောက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အမေပျောက်လို့ ရှာပုံတော်ဖွင့်တဲ့သဲသဲသော်ဆိုတဲ့ ကောင်မ
လေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုတော့ အဲဒီ့ကောင်မလေး အသတ်ခံရလို့ သေရှာပါပြီ။ ဒီနေ့မနက် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာအဲဒီ့သ တင်းတွေ့ တော့ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေမိတယ်။ စောစောက ထိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်မှ မြန်မာမိန်းကေ
လေး တစ်ယောက် အသတ်ခံရတယ်ဆိုပြီး သ တင်း ပါလာတော့ စိတ် ၀င်စားတာနဲ့ ထိုင်းလို ကျွမ်းကျင်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အကူအ ညီတောင်းပြီးဘာသာပြန်ခိုင်းရတယ်။ ၁၃-၄-၂၀၁၃ (သင်္ကြန်အကြိုနေ့) တုန်းက အဲဒီ့ကောင်မလေးကဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာရင်းနှီး တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်(ဖေ့စ်ဘုတ် အကောင့်နာမည်နတ်သားလေးတဲ့)နဲ့ ချိန်းတွေ့ ပါသတဲ့။ချိန်းတွေ့ရင်း ကောင်မလေးကို သတ်ြ ဖတ်ပြီးပိုက်ဆံနဲ့ဖုန်း ကို ယူသွား ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကောင် မလေးအလောင်းကို သူ့အခန်းထဲ
Posted by Gentle Men at 6:25 PM No comments:
သဘောတူညီမှုအရ ဖွင့်လှစ်မည့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများမှာ ကရင် ပြည်နယ်ရှိ ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ် ကုန်သွယ် ရေးစခန်း၊ ထားဝယ်ခရိုင် မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲ အတွင်းရှိ ထီးခီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်း နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မောတောင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး
Posted by Gentle Men at 6:15 PM No comments:
အ၀လွန်သူများ၊ ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး လာသော အမျိုးသမီးများ အတွက် ပထမဦးစွာ ရှောက်ရွက်ကြမ်းများကို ရှာထားပါ။
ပုလင်း တစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုးသကြားသုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီထည့် ရပါမည်။ ပုလင်းများတစ်လုံး စီတွင် ရှောက်၉ရွက် စီထည့်ပေး ပါ။ေ၇ကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့ အပြည့်ထည့်ပြီး အဆို့ ပိတ် လျက် နေပူတွင် ကိုးရက်လှန်းပေးပါ။ ကိုးရက်စေ့လျှင် ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးနိုင်ပြီ။ နံနက် တစ်ကြိမ်၊ ည တစ်ကြိမ် အဆိုပါေ၇ှာက်၇ွက် ဆေးရည်ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်
Posted by Gentle Men at 6:12 PM No comments:
ယူအန်၏ အကြီးမားဆုံး ဒုက္ခသည် ပြောင်းရွှေ့ မှုကြီး၊ ပြည်ပရောက် အချောင်နေ အချောင်စား မြန်မာ ဒုက္ခသည် အတုများ အားလုံး ပြန်လွှတ်ပြီး ဘင်္ဂလီ များကို လည်း ဤသို့ခေါ်ယူရေး UN သို့ ဦးသိန်းစိန် တိုက်တွန်းထား
From : ..narajia
တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော နီပေါနိုင်ငံ တွင် ခိုလုံနေခဲ့သော ဘူတန် ဒုက္ခသည် ၇၈၀၀၀ သည် အမေရိကန်နှင့် အနောက် နိုင်ငံများတွင် အခြေချ နေထိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်ဟု ယူအန် က သောကြာနေ့က ကျေညာသည်။
အဆိုပါဘူတန်ဒုက္ခသည်များသည် နီပေါနိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုခန့်ကြာ ခို လုံနေပြီးနောက် ထိုသို့ အခြေ ချ နေထိုင်ခွင့် ရရှိသွားခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့ရေး အတွက် ဘူတန် အစိုးရနှင့် စေ့စပ် ညှိနိုင်းမူများ နှစ်ပေါင်း များစွာ ပြု
Posted by Gentle Men at 6:10 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 3:24 PM 1 comment:
Posted by Gentle Men at 3:21 PM No comments:
နိုင် ငံအဖြစ် ရှုမြင် လာစေရေး ဆုံးဖြတ်ထားမှုအားထုတ်ဖော် ပြော ကြား ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံနှင့် ပြည်ပရှိ
Posted by Gentle Men at 2:28 PM No comments:
ပြည်ပရံပုံငွေကိုလက်ခံပြီး ပြည်တွင်းမှာပါတီထောင်နိုင်ငံရေးလုပ်မည်ဆိုပါကပါတီဖျက်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများနဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှာ နိုင်ငံရေးပါတီ များ ရံပုံငွေရယူသည့်ကဏ္ဍ ဆွေးနွေးကြရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီး ပြတ်သားစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ၏ လက်အောက် ရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ ကွန်ရက် များက ပြည်ပမှရံပုံငွေ ရယူခြင်းဟာလည်း ပါတီကရ ယူခြင်း ဟု သတ်မှတ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန် မှစပြီး ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေက ပံ့ပိုးတဲ့ရံပုံငွေ ကို ဆက်လက်လက်ခံခြင်းမပြု ရန်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများရှိလာပါက ကော်မရှင်အနေနဲ့ သတိပေး တားမြစ် သွားမှာဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှုမရှိပါက ပါတီဖျက်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွား
ကို သတိ ထားရင်းလုံခြုံရေး ဆောင် ရွက်နေကြတယ်။
ရဲဘော်၊ ရဲမေ မိသားစု အတွက်သာ မက သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေဒေသက လူတွေ စားသုံးနိုင်ဖို့ သီးပင်စား ပင်တွေ စိုက်နေကြတယ်။
တစ်ချို့တွေကျတော့ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက် အမျှဝေ
Posted by Gentle Men at 2:06 PM No comments:
သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှု ကြုံတွေ့ နေ ရသော ကျေးရွာ များတွင် နယ်မြေခံ တပ်မတော်သားများက သောက်သုံး ရေ များ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်း
ပြတ်လပ်မှု ကြုံတွေ့ နေရသော ကျေး ရွာ များတွင် နယ်မြေခံ တပ်မတော် သားများက သောက်သုံး ရေများ ဖြန့်ဝေ လှူဒါန်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်ချင်းကုန်း
ကျေး ရွာအုပ်စုရှိ အိမ်ခြေ ၁၇၆ လုံး၊ လူဦးရေ ၅၆၃ ဦး နေထိုင်သည့် ကျားချောင်း ကျေးရွာတွင် သောက်
မှုများ ကြုံတွေ့ နေရသဖြင့် နယ်မြေခံ တပ်မတော် သားများက ရေသယ်ယာဉ် များဖြင့် ဧပြီ ၁၃ ရက်မှ ၂၃ ရက်ထိ သောက်သုံးရေ ဂါလန် ၁၃၂ဝဝအား ဖြန့် ဝေ လှူဒါန်းသည်။ အလားတူ ကြံခင်းမြို့နယ် ကျည်တိုင် ကျေးရွာတွင်လည်း သောက်သုံးရေ ပြတ်
လပ်သဖြင့် ဧပြီ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်တို့တွင်
အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိူးဇက်ယွန် Joseph Yun က မြန်မာပြည် ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အားပေးထောက်ခံကြောင်း တိုးတက်ပြသတဲ့အနေ နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တဆင့်ပြီးတဆင့် စတင်ကူညီရေးအတွက် နည်းလမ်းတွေကို မိမိတို့ လေ့ လာနေကြောင်း အမေရိကန် လွှတ်တော်မှာ ကြာသာပတေးနေ့က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာ မှု ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာစေလိုတဲ့အပြင် တပြိုင်နက်မှာ ပဲ မြောက်ကိုရီး ယားနိုင် ငံနဲ့စစ်ရေးအရဆက်ဆံမှုတွေလုံးဝဖြတ်တောက်ဖို့ မြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းနေကြောင်း
Posted by Gentle Men at 1:54 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 8:59 AM 1 comment:
အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျန်းမာရေးကောင်းနေဖို့အတွက် အမျှင်ဓာတ်များ စွာ ပါဝင်ပြီး အဆီနည်းတဲ့ အစာတွေကို များများစားသင့်ပေမယ့် အဆင်သင့်အစာတွေကို ပဲ ဖြစ်သ လိုစားကြတာ များပါတယ်။ အစားအသောက်ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းတဲ့အတွက် အဝလွန်တာ ၊နှလုံးရော ဂါနဲ့ တခြားရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်တက်လာပါတယ်။
အခွံခွာထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးမှာ ပိုတက်စီယမ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ကြွက် သား ကြွက် တက်တာ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးဖိအားကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး ကိုစားရင် အဆစ်နဲ့ ကြွက်သားတွေကို နာကျင်မှုကင်းစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ငှက်ပျော သီးမှာ ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေတဲ့ အာနိသင် ပါဝင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်
PhotoStage Slideshow Producer Professional 2.17 Portable
Photo Slideshow ပြုလုပ်ရာ၌ Effects Such as fade, Crossfade, Zoom တွေ Transition Effects တွေ Audio Tools တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Slide Show လေးကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Photo Editing လုပ်လိုသူများ အောက်ပါလင့် မှာDownload ရယူနိုင်ပါသည်
Downloading PhotoStage Slideshow Producer Professional 2.17
Hack ခံလိုက်ရသည့် သင့်၏ Facebook Account အား ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ
အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း Facebook ဆိုတဲ့ လူ မှုရေး ကွန်ယက်ကြီးကို ၁ ဘီလီယံကျော်သော လူအများကစွဲလန်းခုံမင်စွာသုံးစွဲနေကြပါ တယ်။ အသုံးလိုလို့သုံးစွဲတာထက်စွဲလန်းမှုဖြင့်သုံးစွဲတာ
က ပိုများလာနေ ပါတယ်။ ဖုန်း ၊ တက် ဘလက် ၊ ကွန်ပြူတာ၊လက်တော့ပ်စတဲ့အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့နေရာတကာမှာ မျက် စိနောက်လောက်အောင် Facebook မှ Facebook ပါပဲ။
ကဲဒီလောက်တောင် စွဲလန်းနေရတဲ့ သင့်ရဲ့ Facebook ဟာ ဘယ်လောက်တောင်မှ လုံခြုံပါသလဲ။ သင့်အနေ...နဲ့ ကံအကြောင်းမလှလို့ hack ခံလိုက်ရပြီဆိုရင် ဘယ်လိုများ လုပ်ကြမလဲ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာမထိခိုက်ပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့အတော်လေး ထိခိုက်ရမှာ သေချာပါတယ်။ အထူး သဖြင့်
Posted by Gentle Men at 8:39 AM No comments:
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဧရိယာ လုပ်ကွက်အမှတ် ၈ MCC ၏ မြောက်ဘက်ရှိ ယာခင်း တွင် အောင်စိုး၊ ကိုထက် (ရန်ကုန် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်) သောင်းထက်ဦး (ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ-သိပ္ပံ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့)၊ မိုးကြိုး ပြင်အလယ်ရွာနေ ဇော်နိုင်နှင့် ၀င်းကျော်တို့
Posted by Gentle Men at 8:31 AM No comments:
အိမ်ဖော်အား ငှက်ပျောသီး ၊ ပုလင်းများဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခဲ့သည့် ညီအမ ထောင်ဒဏ်ထပ်တိုး (မလေးရှား)
လွန်ခဲ့သော 2003 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လမှ 2014 စက်တင်ဘာလအထိ တစ်နှစ်တိတိအတွင်း Wong Choy Ling နှင့် Wong Choy Kin ညီအမ ၂ ဦးတို့သည် မိမိ အိမ်တွင် ခိုင်းစေရန် ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်ဖော် အင် ဒို နီး ရှားသူ Hanif Muawanah Muhyi အား ငှက်ပျောသီး ၊ ပုလင်း စသည်တို့ဖြင့် အနိုင်ကျင့် နှိပ် စက်ကြောင်း ကို Hanif မှ တိုင်ကြားခဲ့သည်အတွက် Petaling Jaya တရားရုံးတွင်
Posted by Gentle Men at 8:24 AM No comments:
မိုက်ကယ်လန်း ဓါတ်ပုံကိစ္စ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ကာယကံရှင် မော်ဒယ်ကို တောင်းပန်
မြန်မာနယူးဝိခ်ဂျာနယ် အမှတ်(၂) အတွဲ (၇၇) တွင် မိုက်ကယ်လန်းအဖွဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော် ဂျာရှာနှင့် မြန် မာမော်ဒယ် အမရာညိမ်းတို့၏ ဓာတ်ပုံကိုဂုဏ် သိက္ခာကျဆင်းအောင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့်အ
ဒယ် ၏အိမ်သို့သွားရောက်တောင်း ပန် ခဲ့ကြောင်း
အယ်ဒီတာ ဦးထူးလွင်အောင် ကပြောသည်။
ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတင်း ဓါတ်ပုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို တာ ငြင်းမရခဲ့ပါဘူး။ ခုခေတ်မော်ဒယ် အမည်ပြ အဖော်အချွတ်မိန်းကလေးများ များပြား လာတာနဲ့ အမျှ Facebook စာမျက်နှာများတွင်လည်း ယောင် လည် လည်မော်ဒယ်များ အဖော် အချွတ်ပြ ဓါတ်ပုံများ တောက် လျောက် တင်ပြ လာကြတာ ကိုတော့
Posted by Gentle Men at 8:21 AM No comments:
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားသူများ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုအပေါ် ဝန်ပိ တယ် လို့ ယူဆတဲ့အရာများစွာထဲက အခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်မရှိတော့ကြောင်း (သို့) တာဝန်ရ်ှသည့် အခွန် ကိုပေးဆောင်ပြီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ပုံစံ ၁၇/၁၉ ရယူရန်မလိုတော့ဘဲ passport လုပ်နိုင်ပြီ ဆိုေ တာ့ အများပြည်သူ ဝမ်းသာ သွားကြသလို အခွန်ကြွေး ရှိသည့် ပုံမှန် အခွန်ထမ်းများ နဲ့ နိုင်ငံခြား မှာ သွား ရောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ဝန်ငွေခွန်(ပြည်ပနေနိုင်ငံသား၏ ပြည်ပမှရှိသည့်ဝင်ငွေအပေါ် ကောက် ခံ သည့် အခွန်) ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိ သူတွေဟာ ပို၍ ပို၍ ပျော်ရွှင်သွးပါတယ်။
ဆိုင်ရာအခွန်မှူးတွေကတော့ ဝမ်းသာသလို ဝမ်းလည်းနည်းကြပါတယ်။ ဝမ်းသာတာကတော့ အခွန်မှူး အေ ပါ် ဖိ စီးနေ တဲ့ အခွန်ရုံးမှာ ၁၇ လာလုပ်တဲ့အခါ ဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်သူ ဆက်ဆံရေး မပြေလည် မှုကြောင့် ဖြစ်တတ် တဲ့ ပြသနာနဲ့ ၄င်းကိစ္စအတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ မလို
Posted by Gentle Men at 8:15 AM No comments:
မနေ့က လက်ပတောင်းတောင် မှာ ရွာသားတွေ နဲ့ ရဲ တပ်ဖွဲ့ တွေ ပြဿနာ ဖြစ်တယ်၊ ရဲ တွေ ရော ရွာ သားရော တွေရော ဒဏ်ရာတွေ ရသွားကြပါတယ်။ လက်ပတောင်း ပြဿနာ မှာ မုံရွာ နယ် က လူတွေကို ရန် ကုန် ပညာအရည် အချင်း (၁၀) တန်းတောင် မအောင်တဲ့ ဟန်ဝင်းတောင် လို လူ လည် က မြှောက်ထိုး ပင့်ကော် လုပ် ပြီး
"ဒီ စီမံကိန်းက ဦးပိုင် က လုပ်တာ၊ တရုတ်တွေပဲ ရမှာ၊ ဒေါ်စုကြည်လဲ စစ်တပ် နဲ့ ပေါင်းသွားပြီ၊ လက်ပေ တာင်းေ တာင် စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို လက်မခံနဲ့ တို့ရွာ သားတွေကို ကာ ကွယ် မပေးဘူး စတဲ့ စကားတွေပြော၊ တားမြစ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ရွာသွားတွေကို အတင်း လယ် ထွန်ခိုင်း၊ ရဲ နဲ့ ပြဿနာ မဖြစ့်ဖြစ် အောင် လုပ်ပြီး ရွာသားတွေ ဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်အောင်လုပ် ၊ ပြီးရင်
Posted by Gentle Men at 8:11 AM No comments:
KIAများအနေနဲ့ တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့ဖို့လူသစ်များစုဆောင်းနေသလို စုဆောင်းထားသူများ
မြန်မာကို ကုန်သွယ်မှု အထူးအခွင့်အရေးပေးဖို့ အမေရိကန်စဉ်းစား
မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းအရာရှိတဦး သွားရောက်နေ ချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်တင်ပို့မှုတွေအပေါ် လျှော့ပေါ့ပေးသင့် မသင့် အမေရိကန်က စဉ်းစားနေ ပါ တယ်။ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Demetrios Marantis ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် မတိုင်မီမှာပဲ ကုန်သွယ်မှုတွေမှာ အထူး အခွင့်အရေးပေးမယ့် Generalized System of Preferences အစီအစဉ်ကို အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးရုံးက ပြန်လည် သုံးသပ်နေတာပါ။လတ်တလောမှာတော့ နိုင် ငံပေါင်း ၁၂၈ နိုင်ငံ တင်ပို့နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း ၅ ထောင်လောက် ကို အမေရိကန်က အခွန်
Posted by Gentle Men at 7:56 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို စိန်ခေါ်နေသည့် လက်ပံတောင်းက ဓာတ်ပုံများ
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသော လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီ
မံကိန်းနယ်မြေအတွင်း ဧပြီလ ၂၄ ရက် နံ နက် ပိုင်းက လုံခြုံရေး တပ် ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကွန်ရက်တစ်ခုမှ အဖွဲ့ ၀င် အချို့ ပါဝင်သော ဒေသခံများ ပဋိပ က္ခဖြစ် ပွားခဲ့ရာ ရဲအရာရှိများ အပါအ၀င် ၁၈ ဦးခန့် ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ပြီး ဒေသခံအချို့ကို ထိန်းသိမ်း ထာြးေ ကာင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဆည်တည်းရွာအနီးရှိ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ် ပြန်ထားသော လယ်မြေအတွင်း ကြေးနီ စီမံကိန်း ကန့်ကွက်သူများနှင့်
Posted by Gentle Men at 7:46 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကြောင်းပြ တစ်နိုင်ငံလုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နိုင်သည့် အခြေအနေများ
ပြည်တွင်းေ ရး တွင် အကြီးကျယ်ဆုံး ရင်ဆိုင်ရ မည့် အခြေအနေဟာ တည်ရှိနေတဲ့ အစိုးရကို လက်နက် ဖြင့် ပုန်ကန်ခြား နားခြင်းဘဲ ဆိုသည် ကတော့ ၂၀-၉-၁၉၄၆ခုနှစ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း ရေးသား သည့် စစ်အုပ် ချုပ်ရေးဆို တာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးမှ ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ပြော သကဲ့ သို့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၃ လ အကြာတွင် ကွန်မြူ နစ်များမှ ဆိုရှယ်လစ် အရိုးများ တောင်လို ပုံစေရမည်ဆို၍အစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်စတင်တိုက်ခိုက်သည်။
အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် တောင်တန်းဒေသများမှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်
Posted by Gentle Men at 7:42 PM No comments: